I-Russia ihlawulisa i-Google 6,75 million ngezinhlelo zokusebenza ze-Android | Izindaba zamagajethi
I-Russia ihlawulisa i-Google 6,75 million ngezinhlelo zokusebenza ze-Android
Udoti owanda njalo, ugcwala amadivayisi ethu eselula ngisho nangaphambi kokuba avulwe. I-Google ngokwendabuko ifaka izinhlelo eziningi ezihlobene nezinsizakalo zayo kumadivayisi anohlelo lwawo lokusebenza. Izicelo ezigcina ziphindiwe, njengoba izinkampani ezinjengeSamsung zinezivumelwano neDropbox noma iWhatsApp bese sizithola ngasikhathi sinye neGoogle Drayivu noma ama-Hangouts, sithatha imemori ngokungadingekile, ikakhulukazi uma kukhulunywa ngenkonzo cishe engekho umuntu oyisebenzisayo. I-Russia ifune ukubeka ikhambi elincane kulokhu, ihlawulisa i-Google 6,75 million dollars ngezinhlelo zokusebenza ezifakwe ngaphambilini kumadivayisi.
I-Google ne-Android ayinazo izinkinga zokungathembeki eYurophu, lapho kutholwa khona kakhulu. I-FAS (iRussian Federation Antimonopoly Service) ifake inhlawulo kosozigidi kubafana bakwaGoogle ngenxa yalezi zinhlelo zokusebenza i-Google efaka kuqala kuwo wonke amadivayisi asebenzisa i-Android, noma ngabe iluphi uhlobo lomkhiqizo noma izidingo zomsebenzisi, njengalapho zikuphoqa ukuthi uzidale i-akhawunti yakwaGoogle Plus uma ufuna ukujabulela izinsizakalo ze-Google ngokujwayelekile, njenge-YouTube. Iqiniso ukuthi yizinyathelo iGoogle okufanele ingazithathi, ngoba ayibasweli abasebenzisi, kepha ukufuna ukwenza izinsizakalo zayo zibe nkulu ngokukhwabanisa akubonakali kulungile kimi.
U-Yandex ungumncintiswano obalulekile we-Google eRussia, inkampani enesitayela se-Google, enenjini yokusesha ethandwa kakhulu eRussia futhi ngasikhathi sinye yenza amadivayisi eselula, ancintisana naye ocacile, lowo uhulumeni waseRussia afuna ukumhlomulisa, okuyinto ebholeni owaziwa ngokuthi "unompempe wasekhaya." KwaGoogle, inhlawulo lena ushintsho oluncane, kepha ngokusho kwezibalo ze-FAS, kungu-15% walokho okutholwe iGoogle eRussia ngo-2014. Okunye ukushayisana nokuzimela kweGoogle eYurophu.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » I-Russia ihlawulisa i-Google 6,75 million ngezinhlelo zokusebenza ze-Android
Jabulela izinhlelo zokusebenza nemidlalo efinyelela ku-10.000 kusuka kumakadebona we-AMIGA mahhala
Uchungechunge lwe-Netflix olubalulekile lwe-7 ukujabulela leli hlobo